Wararka Maanta: Arbaco, Apr 1 , 2020-Doorasho maanta ka dhaceysa magaalada Baydhabo
Arbaco, April, 01, 2020 (HOL)- Maanta oo Arbaco ah ayaa lagu waddaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay lagu qabto doorashada guddoonka Baarlamaanka cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Doorashadan ayaa xubnaha ku tartamaya guddoonka Baarlamaanka waxaa ay kala yihiin Xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka oo dhinaca kale ah Danjiraha midowga Yurub ee Dowladda Soomaaliya iyo waliba Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nuur oo doonaya xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Xilka Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa sidoo kale waxaa u tartami doona Xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed oo u taagan xilka guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo Xildhibaan Maxamed Nuur Maxamed oo u tartami doona xilka guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Dhinaca kale xildhibaan Shamsa Maxamed Yaroow ayaa noqoneysa qofka kaliya ee u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Danjire Cali Saciid Fiqi ayaa dad badanni u saadaalinayaa in uu noqonayo guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.